Anyị nwalere Aukey's USB-C Hub, ọdụ ụgbọ mmiri 8-niile-na-otu zuru oke maka MacBook M1 ọhụrụ ahụ | Nyocha | Akụkọ akụrụngwa
Otu n'ime nnukwu nsogbu m zutere mgbe m na-enweta ihe ọhụrụ MacBook Pro na M1 processor bụ enweghị ọdụ ụgbọ mmiri, nsogbu na-arịwanye elu ebe ọ bụ na ejiji, karịsịa na Apple, bụ ịmalite ngwaọrụ ndị nwere ọdụ ụgbọ mmiri ole na ole. Boysmụ nwoke nke Aukey aghaghi iguta uche m ma nye anyi USB-C Hub ohuru nke 8-port.
Ihe na-akpali Hub 8 na 1 nke ị ga - akwụsị ịnwe nsogbu nke enweghị ọdụ ụgbọ mmiri na kọmputa gị. Mfe aka dị mfe na aka iji gosipụta na ngwaahịa sitere na otu ụdị ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa na teknụzụ nke teknụzụ. Nọgide na-agụ na anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Aukey USB-C Hub.
A ghaghi ikwu ihe niile, ọ bụ Hub, atụla anya na ihe ga-eme, a Ogwe na ọdụ ụgbọ mmiri 8 ga-edozi nsogbu ọdụ ụgbọ mmiri niile na anyị nwere ike ịnwe na ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụ nkwụnye na Play n'ihi ya, naanị anyị ga - ejikọ ya na ọdụ USB-C maka Aukey iji mee anwansi niile dị mkpa maka akụkụ anyị iji rụọ ọrụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto, ndị ngwaọrụ bụ nnọọ mma, na a «ohere nwa» dị nnọọ ka agba na Apple na-eme ya Macs. N'elu anyi ga ahu otu ọnọdụ duziri nke na-adịghị akpaghasị ma ọlị, y N’akụkụ anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri niile na umu nwoke Aukey na enye anyi.
Dịka ị pụrụ ịhụ na gallery mbụ, anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri ndị a:
USB-C na nnyefe ike nke ga - enye gị ohere ịgba Mac gị ụgwọ ma ọ bụrụ na ị na - eji ọdụ USB-C ndị ọzọ fọdụrụ maka ngwaọrụ ọzọ.
Puerto HDMI dakọtara na mkpebi 4K.
3 USB-A ọdụ ụgbọ mmiri (2 nke ha 3.0 akara na-acha anụnụ anụnụ).
Otu oghere SD, bara uru nke ukwuu na-atụle na obere laptọọpụ pere mpe gụnyere ya.
Oghere kaadị MicroSD.
Ethernet n'ọdụ ụgbọ mmiri, na LED abụọ ga-egosi akara ala nke njikọ ahụ (anyị enweghị ike iwepu ha mana ha anaghị echegbu onwe ha nke ukwuu).
Ka i si hụ, anyị enweghị ike ileghara ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla anyaAgbanyeghị, anyị ga-akpachara anya ma ọ bụrụ na anyị ejiri ha niile n'otu oge, ọkachasị ka Hub bụrụ ọkụ wee ghara ịrụ ọrụ ọfụma. Dịka akụkụ dị njọ, m ga-ekwukwa na ọ bụ USB-C Hub, ọ bụghị Thunderbolt 3, mana o doro anya na ọnụahịa a na-ere ahịa ọ bụ nnukwu nhọrọ. Thunderbolt 3 na-enye ohere ọsọ ọsọ dị elu ma na-arụkarị ọrụ na mpụga.
Ọzọ nke uru nke a 8-in-1 USB-C Hub bụ ya size, ukwuu obere, ma umu nwoke si Aukey na-enye anyi a mara mma na-ebu akpa na nke iji kpuchido eriri USB-C nke Hub. N’enweghị mgbagha, nkọwa zuru oke nke enwere ekele.
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla., ka m gwara gị bụ a dị nnọọ mma nhọrọ maka onye ọ bụla zụtara ihe ọhụrụ MacBook Pro ma ọ bụ Air na M1 processorNa njedebe ọdụ ụgbọ mmiri amachiri na site na Hub nke njirimara ndị a, anyị ejirila ọdụ ụgbọ mmiri dozie nsogbu ahụ. Na Ọnụahịa na-adịkarị n'etiti 35 euro, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịchọta ya mgbe ụfọdụ ruru € 20. Ekwadoro m ya, agwala m gị na ọ bụghị egbe egbe igwe ma ọ bụ maka ọtụtụ ikpe ịchọrọ ebe ọzọ ị na-emesapụ aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Anyị nwalere Aukey si USB-C Hub, 8-port niile na-na-otu zuru okè maka ọhụrụ MacBook M1 [Nyocha]
Otu esi emepụta netwọọdụ WiFi mesh n'ụlọ gị